လူထုအမှတ်သညာပွဲတော် – Open History Project Myanmar
ဆုရ မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
မကွေးမြို့တော်သည် မြန်မာပြည်အလည်ပိုင်းတွင် ‌ရှေးအစဥ်အဆက် ကတည်းက တည်ရှိသော မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ဆီထွက်သီးနှံပေါများ၍ မြန်မာပြည်၏ ဆီအိုးကြီးဟုထင်ရှားသည်။ အချက်အခြာကျ၍ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း၏ တက္ကသိုလ်မြို့တော် ဖြစ်လာသည်။ မကွေးမြို့တော်၏ ပြောင်းလဲလာသော ပုံရိပ်များကို ထင်ဟပ်စေသည့် လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ Magway is divisional city which located in middle Myanmar. The city is famous for seasonal plants such as Peanuts ans sasame and known as Big Oil Pot for the country. It become universities city for middle Myanmar.
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ရာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် နှစ်၁၀၀ ပြည့်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ရာပြည့် သဘင်ပွဲကို ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာမှ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာအထိ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကျင်ပရန် ရာပြည့်ကော်မတီမှ စီစဥ်ထားပါသည်။ တက္ကသိုလ် ရာပြည့် အမှတ်သညာပွဲတော်ကို သမိုင်းဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှင် ပန်းဆိုးတန်းပန်းချီခန်းမတို့ ပူးပေါင်း၍ ဖွင့်ပွဲတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပညာရေးစကား၀ိုင်များ ၊ ဟောပြောပွဲများ ၊ ဆွေးနွေးပွဲများပါ၀င်၍ ရှားပါး ဓာတ်ပုံဟောင်းများစွာ ခင်းကျင်းပြသနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဇွန်လလယ်တွင် ဒုတိယပွဲ ကျင်းပရန် စီစဥ်ထားသော်လည်း ကိုဗစ်နိုင်တင်း ကပ်ရောဂါကြောင့် ‌‌ရွှေ့ဆိုင်းထားပါသည်။